चैत ०६ गते शुक्रबार, यस्तो छ तपाईको राशिफल – Gorkhali Dainik
चैत ०६ गते शुक्रबार, यस्तो छ तपाईको राशिफल
March 18, 2021 199
आज तपाइलाई अल्छीपनले सताउला । शरिरमा रोग लाग्नाले धनको पनि क्षति होला । स्वास्थ्य कमजोर बन्नुका साथै काममा ढिलासुस्ती हुन सक्छ । खानपानमा विचार पुर्याउनु होला । स्वास्थ्यमा भने कमजोरी अनुभव हुनेछ । केही बाध्यात्मक परिस्थितिसँग सम्झौता गर्नुपर्ला ।
परिश्रम अनुसार उपलब्धि राम्रै पाइएला । रोकिएका काम फेरी सुरु हुन सक्छन् । पाहुनाको आगमन हुने दिन छ । तपाइको बुद्दीको सहि प्रयोग भइ चिताएका काममा सफलता पाइने योग छ । परिवारजनका आकांक्षा पूरा गर्न सकिनेछ । आज कसैबाट समर्थन एवम् धन पाइने दिन छ ।
चिताएको काममा सफलता पाइनेछ । धन लाभ पनि हुने दिन छ । कूसैबाट समर्थन पाइएला । धनको लाभ अर्थात पैैसा कमाइने दिन छ । पुराना साथीसँगको भेटघाटले मन रमाउने छ । आज तपाइलाई अनौठो तरिकाबाट धन लाभ हुन सक्छ । परिवारबाट सुखको अनुभुति मिल्ला ।
शरिरमा सामान्य रोगले सताउला । समाजिक सम्मान भने पाउने समय छ । यात्राको पनि योग छ । अनौठो तरिकाबाट रुपैँया पैसा कमाइने छ । आज रमाइलो यात्राको योग पनि रहेको छ । हाँसखेल, भ्रमण र मनोरञ्जनका क्रममा दिन बित्नेछ । रमणीय र सुखद यात्राको योग छ ।
आर्थिक पक्ष खासै राम्रो छैन । नसोचेको अनि बेकामको क्षेत्रमा पैसा खर्च हुनेछ, सावधान रहनु होला । सामान्य रोगले सताउला, सावधान रहनु होला । साथै, भौतिक सरसामनको पनि क्षति हुने दिन छ । आर्थिक अभाव देखा पर्न सक्छ । भौतिक साधनको पनि क्षति हुने दिन छ ।
बिहानी पख सुखको अनुभव होला । बेलुकी काम गर्नमा मन नलाग्न पनि सक्छ । बन्दैन भनेको काम पनि तपाइको अथक प्रयासमा बन्ने दिन छ । आफन्तको सहयोग पनि प्राप्त हुने दिन छ । नसोचेको आफन्तसँग भेटघाट हुनाले मन प्रफुल्ल हुने छ । सोचे अनुसार काम सम्पन्न भने हुँदैन ।
आजको दिन तपाइको पैसा कमाउने योग रहेको छ । नचिताएको ठाँउबाट आम्दानी हुने दिन छ । आम्दानीका प्रशस्तै बाटाहरु खुल्ने दिन छ । ब्यापार ब्यवसायमा राम्रै आम्दानी हुनेछ । आवश्यक र उपलब्धीमूलक यात्रा हुन सक्छ । सकारात्मक र व्यवहारिक सोचको विकास हुनेछ ।
कुनै नयाँ कामको थालनी गर्नु भए राम्रो हुन्छ । परिवारमा आर्थिक समस्याले पनि सताउने छ । काम गर्न जाँगर आउनाले धनको लाभ होला । सन्तान पक्षबाट सुखको अनुभुति पनि हुनेछ । नयाँ काम सम्बन्धि योजना बनाउँदा फाइदा हुन सक्छ । ब्यापार ब्यवसायबाट लाभ मिल्ने देखिन्छ ।
तपाइलाई आज अनावश्यक रुपमा डर लाग्न सक्छ । कसैसँग हल्का मनमुटाव पनि होला । विचार बढ्ने, समयमा निर्णय नहुँदा काममा अवरोध आउने र मनमा चिन्ता बढ्ने योग छ । स्वास्थ्यमा अचानक गडबडी आउने सम्भावना देखिन्छ । चोट पटकको भय पनि छ ।
तपाइको आज कसैबाट आदर पाउने दिन छ, तर पनि जागिरमा भने खासै मन नजाला । धन मान पाउने योग छ । नोकरी तथा राजनितीमा आफ्नो बर्चस्व बढाउन सकिनेछ । विशिष्ट व्यक्तित्वहरूसँग मित्रता बढ्नेछ । अरूलाई प्रभावित पारेर काम बनाउने समय छ ।
आज तपाइले सोचेका काम पुरा भइ सुखको अनुभव हुने दिन छ । साथै, रुपैँया पैसाको पनि कारोबार राम्रै होला । परिवारजनको साथले नयाँ आशा पलाउने छ । दाम्पत्य जीवन सुखमा रमाउने समय छ । परोपकार र धार्मिक क्षेत्रमा लगानी गरेमा राम्रो प्रतिफल प्राप्त हुनेछ ।
नसोचेको ठाँउबाट आकस्मिक लाभ हुन सक्छ । तर, पनि परिवारमा भने सामान्य विवाद होला । आकस्मिक निम्तोमा सहभागी हुने सम्भावना देखिन्छ । आहार विहारमा विशेष सतर्क रहनु राम्रो हुन्छ । आयआर्जन पनि राम्रै हुनेछ । अतिथिका रूपमा सम्मान पाइने समय छ ।
Prevकाठमाडौं उपत्यकामा भूकम्पको धक्का महसुस
Nextबर्दियामा बाघले मान्छे मा, रेको भन्दै बाघ समातियो
युट्युब हेरेर नक्कली नोट उत्पादन, कीर्तिपुरमै रहेछ नोट छाप्ने यस्तो मेसिन
खुट्टाले हवाइजहाज चलाउने पाइलट नेपाल आउँदै….!
प्रेमपत्रको जवाफ नपाएका किशोरले यसरी गरे कविताको ह त्या , एक वर्षपछि समातिए
बर्दियामा बाघको फेरि आ”क्र,म,णबाट पुलिसराम को मृ;त्यु (6918)
भोलिदेखि गाडि चल्न नदिइने ! (3669)
दुखद खबर : अभागी आमा चम्ल्याहा बच्चाको जन्म त दीईन तर मुख हेर्न पहीन्न, आमाको मृत्यु (3511)
BREAKING NEWS: नेपालमा भित्रियो नयाँ भाइरस, भोलि देखि १ महिना सम्म लकडाउन, पुरा हेर्नुहोस् (2989)
ब्लड क्यान्सर हुनुअघि शरीरले दिन्छ यी ५ संकेत, नगर्नुहोस् वेवास्ता (2692)
वातावरण मा अझै सुधार नआएकाले थप ७ दिन विद्यालय बन्द गर्ने मन्त्रालयको निर्णय ? (2310)
बागलुङमा होली मनाउदा ‘झडप’, करिब १५ युवा यसरी भिरबाट खसेको आशंका (भिडियोसहित) (2031)
हार्दिक बधाई : रेखा थापाले यि हेण्डसम युवक संग लगनगाठोँ कस्दैँ ? (1756)
बाघको आ”तंक फेरि; बर्दियाको ठाकुरबाबाका ६२ वर्षीय रावतको मृ’त्यु (1703)
तु घर बिक्रीमा मात्र7लाख 99 हजार, झुटो होईन सिधै धनिको नम्बर सहित, छिटो हेर्नुस (1573)
आजको राशिफल : वि.सं.२०७८ साल बैसाख ०१ गते । बुधबार । ईश्वी सन् २०२१ अप्रिल १४ तारिख
ब्रिटिस गोर्खा र सिंगापुर पुलिसमा भर्तीको मापदण्ड झन् कडा
रुपन्देहीमा नेपाल समूहको समानान्तर कमिटी